သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှု – မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ – MFPEA
Homeသန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှု – မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ
သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှု – သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှု ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း၊ စားသောက်ကုန်နှင့် အဖျော်ယမကာ (F&B) လုပ်ငန်းများနှင့် မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း?
အသေးစားနှင့်အကြီးစား စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာ (F&B) လုပ်ငန်းများသည် လူထု၏ စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှုနှင့် အာဟာရဖြည့်ဆည်းမှုများအတွက် အထောက်အကူပြုသည့်အပြင် ၊ တိုင်းပြည် ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှုန်း အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုသည်။ သို့သော် ၄င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဥ်များသည် အခြားကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍများကဲ့သို့ များပြားသော စွမ်းအင်နှင့် ကုန်ကြမ်း များစွာကို အသုံးပြုရခြင်းကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း နှင့် သယံဇာတများ ကုန်ခမ်းခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများမှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ စွန့်ပစ်ရေများနှင့် အခိုးအငွေ့များ ထုတ်လွှတ်သည့်အတွက် မြစ်များ ၊ လေထုနှင့် မြေဆီလွှာများ ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ကိုမည်ကဲ့သို့ နည်းပါးစေနိုင်သနည်း?
ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဥ် (UNEP) သည် သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အယူအဆကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၊ ‘လုပ်ငန်းစဥ်များ နှင့်၊ ထုတ်ကုန် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် ‌ဂေဟစနစ်ထိရောက်မှု တိုးမြှင့်ပေးပြီး လူသားများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်များကို လျှော့ချပေးနိုင်ရန်’ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် ထိရောက်သော မဟာဗျူဟာကို စဥ်ဆက်မပြတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ (UN) သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ထုတ်လုပ်မှုကို ဦးစားပေး သတ်မှတ်သည့် အနေဖြင့် စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ (SDGs) အောက်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အတိအကျ ဆိုရသော် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ၁၂ (“တာဝန်ယူမှု ရှိသော စားသုံးမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု”)တွင်ဖြစ်သည်။ – https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
သန့်စင်သောထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်တားစီးခြင်း ၊ အရင်းအမြစ် လျှော့ချခြင်း၊ အလေအလွင့်လျှော့ချခြင်း နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်/‌ဂေဟစနစ်ကို အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်း တိုင်းတာမှုများလည်း ပါဝင်သည်။ ၄င်းတို့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု ၊ အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများကို အစားထိုးခြင်း ၊ လုပ်ငန်းစဥ်များကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် စွန့်ပစ်ထုတ်ကုန်များ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ ၄င်းအယူအဆ၏ အဓိကအနှစ်သာရမှာ ညစ်ညမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းထက် ကာကွယ်တားစီး ခြင်းဖြစ်သည်။
သန့်စင်သောထုတ်လုပ်မှု – ရည်ရွယ်ချက်
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်ပမာဏတိုးမြှင့်ရန် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု၏ ပစ္စည်းကရိယာများ နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အလားအလာကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့်စတင်ဆောင်ရွက်သည်။ သဘာဝ အရင်းအမြစ် လျှော့ချရေး မဟာဗျူဟာများမှတဆင့် ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဥ်များမှထွက်ရှိလာသည့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုများကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် နည်းပညာ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်မှုများသည် ပစ္စည်းကရိယာများနှင့် စွမ်းအင်အသုံးပြုရာတွင် လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပြီး ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ၊ စွန့်ပစ်ရေဆိုးများ ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ ၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ဆူညံသံများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်။ https://en.wikipedia.org/wiki/Cleaner_production
သန့်စင်သောထုတ်လုပ်မှု – အကျိုးကျေးဇူးများ
သန့်စင်သောထုတ်လုပ်မှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ – စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလျော့နည်းလာခြင်း ၊ တန်ဖိုးရှိ သော ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ရယူအသုံးချနိုင်ခြင်း ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်လာခြင်း ၊ သယံဇာတ အရင်းအမြစ် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်လာခြင်း ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လျော့နည်းလာ ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအား လျှော့ချလာနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Total Website Visits: 87246